FAALLO: Soomaaliya maxay la tageysaa shir madaxeedka Midowga Afrika? | Hadalsame Media
TOOS u daawo: Man United vs Leicester City, SSC Napoli vs…
DEG DEG: Miigagga Ruushka oo hawada dalkooda ka eryey 3 dayuurad…
XOG MUHIM AH: Kenya ma hawada ayay xiratey mise? Halkeese martay…
Warbixin ku saabsan xogihii ugu dambeeyey ee bilashada bisha Shawaal (Dalal…
KU BUURI AQOONTAADA: 10-ka cunto ee kordhin karta awoodda MASKAXDAADA &…
5 QODOB oo ay ku caddahay in ay Madaxtooyadu ku khaldan…
XOG: Midowga Afrika oo aqbalay codsi ka yimid mucaaradka (Diblomaasi laga…
Turkiga & UK oo isku mari la’ martigelinta dhamaadka CL (Dowladda…
Funaanadda cusub ee Milan oo soo jiidatey taageerayaasha & rikoodh cusub…
Inter Milan oo heshay khabar aan ka qoslin xilli ay dabbaaldegeyso…
Home Arrimaha Caalamka FAALLO: Soomaaliya maxay la tageysaa shir madaxeedka Midowga Afrika?
FAALLO: Soomaaliya maxay la tageysaa shir madaxeedka Midowga Afrika?
(Addis Ababa) 10 Feb 2020 – Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa shir madaxeedka 33-aad ee Midowga Addis Ababa ka furmay la tagtay arrima badan oo quseeya nabadda, siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada.
Furitaanki shirkaasina Madaxweynaha Masar C/fataax Siisi oo ahaa guddoomiyihi hore e midowga Afrika ayaa xilka Guddoomiyanimada ku wareejiyey Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa.
Soomaaliya maxay la shir tageysaa?
Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka heer madaxweyne uga qayb galay Shir madaxeedka Mudowga Afrika ee ka furmay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.
Madaxweyne Max’ed C/llaahi Farmaajo oo shirkaasi ka qayb galayna wuxuu kulamma gaargaar ah la qaatay madaxda waddama ay ka midka yihiin Norway, Canada, Suudaan, South Suudaan iyo Jamhuuriyadda Jabuuti.
Wuxuuna madaxweynaha uu madaxda waddamadasi uu kala hadlay sidi ay u xoojin lahaayeen xiriirka iskaashi ee ay Soomaaliya la leeyihiin sidi loo xoojin lahaa.
Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Federaalka Soomaaliya Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad oo BBC u warramay wuxuu sheegay “shir ka qayb galkiisa inuu muhiimad gaar ah u leedahay Soomaaliya dunidana ay ku ogaaneyso Soomaaliya heerka ay mareyso iyo dhibaatooyinka jira, garab istaagga ay Soomaaliya caalamka ugu baahan tahay garab istaaggaasi oo noqon kara mid dhaqaale, mid siyaasadeed iyo mid bulsho.”
“Soomaaliya arrimaha ugu weyn oo ay shirkan kaga hadleyso ka sokoow in xaaladdeeda la ogaado waxaa ka mid ah in dadka Soomaaliyeed noolashooda kor loo qaado, dalalkana lagu marti qaado iney Soomaaliya maal gashadaan, in loo sheego Soomaaliya in deyn cafiski u soo dhaw yahay waddamada qaarna la weydiisto iney garab istaagaan iyada oo waddamada qaar ee horay Soomaaliya u soo garab istaagayna looga mahadceliyo. Norway oo kale iney Soomaaliya ka kaalmeyso Amniga iyo la dagaallanka aragagixisada ayaa ka mid ah waxyaabaha lagala hadlay.” ayuu yiri Wasiir Cawad.
“Madaxweynaha Uganda, Ra’isal wasaaraha Itoobiya, madaxweynaha Nigeriab iyo Madaxweynaha Ruwaanda madax ay ka mid yihiin oo shir madaxeedkan ka soo qayb galay ayaa u qorsheysan madaxweyne Farmaajo inuu kulammo gaar gaar ah uu la yeesho” ayuu yiri Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Federaalka Soomaaliya Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad oo BBC u warramay.
Halkudhigga shir madaxeedka
Shir Madaxeedka 33-aad ee Midowga Afrika ee sanadkan 2020 waxaa halku dhig looga dhigay ‘Aamusinta Qoriga’ oo loola jeedo in la joojiyo dagaallada iyo isku dhacyada.
Waxaana Shir mdaxeedka ka soo qayb galay in ka badan 30 madaxweyne, ra’isal wasaarayaal iyo 7 wasiirro arrima dibadeed.
Previous articleSoomaalida Norway, arrin kale oo nasiib darro ah oo ka dhacday masjidkii lagu muransanaa ee Oslo
Next articleMaxaa ka cusub kiiska ragga lagu helay dilkii Caa’isha Ilyaas? (Wararkii u dambeeyay)
TOOS u daawo: Man United vs Leicester City, SSC Napoli vs Udinese, Levante vs Barcelona – LIVE (Shaxda Sugan)
XOG MUHIM AH: Kenya ma hawada ayay xiratey mise? Halkeese martay dayuuraddii MW Farmaajo?
(Moscow) 11 Maajo 2021 - Dayuuradaha Ruushka ee Su-30 ayaa loo diray hawada Badda Black Sea maanta si ay halkaa uga shuushiyaan 3 dayuuradood...
Warbixin ku saabsan xogihii ugu dambeeyey ee bilashada bisha Shawaal (Dalal Muslim ah & kuwa kale oo hadlay)
KU BUURI AQOONTAADA: 10-ka cunto ee kordhin karta awoodda MASKAXDAADA & xusuustaada
5 QODOB oo ay ku caddahay in ay Madaxtooyadu ku khaldan tahay muranka diblomaasiyadeed ee ay kula jirto Kenya
Man Utd: De Gea, Williams, Bailly, Tuanzebe, Alex Telles, Van de Beek, Matic, Diallo, Mata, Elanga, Greenwood. Kaydka: Lindelof, Pogba, Cavani, Rashford, Bruno Fernandes, Shaw,...
DF Somalia oo war cusub kasoo saartay xiriirka Kenya (Jaadka miyaa la furayaa?)
GOOGOOSKA: Juventus vs AC Milan 0-3 (Milan oo gaartey guul CL)
TOOS u daawo: Man City vs Chelsea – LIVE (Shaxda Sugan)
”Waxaa naloo diray inaan soo dilno nin aabahay abti u ahaa!” – Waa qiso run ah oo dhacday
hadalsame - May 10, 2021
(Hadalsame) 10 Maajo 2021 - "Anigoo yar ayaa aabbahay waxaa dilay reer kale oo aan degaan wadaagnay. Markaan soo hanaqaaday ayaa maalin reerkeennu shiray....